विज्ञान र प्रविधि Archives – Page2of 20 – Samacharpati
टिकटकको लोकप्रियताले नेपालको इन्टरनेटको गुणस्तरमा धक्का
काठमाडौँ , १९ भदाै । टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता छ महिनायता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता त्यसयता चुलिएको छ । टिकटकको चुलिँदो लोकप्रियताले नेपालको इन्टरनेटको गुणस्तरमा भने धक्का दिएको […]
काठमाडौँ, १६ भदाै । अब काठमाडौँबाट बेलायतसम्म बसमा नै सरर जान मिल्ने भएको छ । काठमाडौंबाट ११ सय किलोमिटर टाढा नयाँ दिल्लीसम्म एउटा बसमा गएपछि नयाँ दिल्लीबाट सिधै लण्डन जान सकिने भएको छ । हाल कोरोना महामारीले अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका बन्द भए पनि बन्द खुलेपछि दिल्लीदेखि लण्डनसम्म बसमा नै जान सकिने बेलायती अखबार द मिररले […]
ललितपुर, १६ भदौ । ललितपुर महानगरपालिकाले अपाङ्गतामैत्री ट्याक्सी अर्थात् क्याब प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । महानगरपालिकाले सोमबार स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुर र स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र इरुका जापानबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हिँडडुलमा सहज पुर्याउन उक्त ट्याक्सी प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मध्यनजर गरी उनीहरुको […]
कर्णबहादुर रोकाया, हुम्ला, १५ भदाै । नेपाल राष्ट्रिय बाछिटा प्रतिष्ठानको आयोजनामा बाछिटा लेखनको एक सय ११ दिन पुगेको अवसरमा विश्वस्तरीय भुर्चअल बाछिटा कार्यक्रम २०७७ साल भदौ १३ गते शनिवार बेलुका ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सम्पन्न भएको छ । “तीन पाँच तीन अक्षर”बाट सिर्जना गरिने नेपाली कविता विधाको सबभन्दा छोटो र एक मौलिक उपविधा हो । […]
काठमाडौँ, १० भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारणले कक्षा कोठामा गई पठनपाठन गर्न सम्भव नहुँदा भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ भइरहेकाले विद्यार्थीले आ–आफ्नो अध्ययनरत विभाग ÷स्कूल ÷क्याम्पसमा सम्पर्क राखी पठनपाठनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भएको छ । […]
दमौली, ७ भदौ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गतका कामका लागि तीन कम्पनीले चासो देखाएका छन् । आयोजनाको पहिलो प्याकेजका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान भएकामा तीन कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको र बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सकेर स्वीकृतिका लागि एडिबी पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका प्रबन्धक श्यामजी भण्डारीका अनुसार पहिलो प्याकेज […]
पाेखरा, ७ भदाै । १. के हो Pi Network भनेको ? यो आगामी 2021 March देखी आउन लागेको Pi डिजिटल पैसा अर्थात क्रिप्टोकरेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने प्रोजेक्ट हो, जसको अहिले दोस्रो चरण चलिरहेको छ । यो हाम्रो हातमा रहेको मोबाईल बाटै कमाउन (Mining) सकिने पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो । यो स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटीका ३ जना phd होल्डर क्रिप्टोकरेन्सी […]
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले बुबाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा ह्याप्पी लर्निङ प्याक सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले कोभिड १९ को महामारीको समयमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो नयाँ प्याक ल्याएको हो ।निकै सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने यो प्याकेजबाट विद्यालय र विश्वविद्यालयको अनलाइन पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । […]
पोखरा, ३२ साउन । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स, कास्कीले बैङ्कहरुको अनलाईन ट्रान्जेसनलाई निःशुल्क बनाउन माग गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष किसान सुनारले कोरोनाको कहर हुँदाहुँदै पनि साउन महिनापछि बैङ्कहरुले अनलाईन ट्रान्जेसनमा चार्ज तथा अतिरिक्त शुल्क लिएकोमा असहमति जनाएका छन् । पोखरा चेम्बर अफ कमर्स, कास्कीले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा […]
काठमाडौं, २९ साउन । युवा वर्गलाई लक्षित गरेर डिजाइन गरिएको अनलाइन ड्रिभन प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रान्ड इन्फिनिक्सले धेरै अपेक्षा गरेको Note7सिरिज लन्च गरेको छ । इन्फिनिक्सको Note7सिरिजमा 48MP Quad क्यामेरा जडित छ र यसले कम प्रकाश भएको ठाँउमा पनि high detail फोटो खिच्छ । साथै यसमा MediaTek Helio G70 chipset / 6.95” HD+ Infinity-O display जडित छ । यस Note […]
दमौली, २४ साउन नेपाल सरकारको नमूना विद्यालय छनोटमा परेको तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित निर्मल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रविधि तालीम प्रदान गरिएको छ । प्रविधिमा दक्ष बनाउने उद्देश्यसहित विद्यालयले शिक्षकलाई प्रविधि तालीम प्रदान गरेको हो । सरकारले उक्त विद्यालयलाई २४ थान कम्प्युटर, चार थान सिसिटिभी क्यामरा, इन्भर्टर, प्रोजेक्टरलगायतका सामग्री सहयोग गरेको थियो । सोही सामग्रीको प्रयोग […]
काठमाण्डौँ, २४ साउन । यहि साउन २५ गते आईतबार विश्व स्तरीय अनलाइन र्याली अफ होप आयोजना भएकाे छ । २१ औं शताब्दीमा मानव जातिले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र सर्वव्यापक मूल्यमान्यता साकार गर्ने उद्देश्यले आगामी अगष्ट ९, २०२० अर्थात साउन २५ गते र्याली अफ होप हुन लागेको हो । सो र्यालीमा […]